Trafikan’olombelona :: Misy mivarotra roanjato tapitrisa ariary ny olona iray • AoRaha
Fivarotana olona. “Misy ny tranga fivarotana olona amin’ ny vidiny roanjato tapitrisa ariary ny iray eto Antsirabe”, hoy ny kolonely Randrianarimasy Radosoa, kaomandin’ny Vondron-tobim-pileovan’ ny Zandarimaria Vakinan­karatra.
Efa nisy ireo tra-tehaky ny Zandarimaria ka natolotra ny Fitsarana. Tsy mifidy ireo mpanao varomaizina olona, fa na olon-dehibe na ankizy dia samy lasibatra avokoa. “Ahiana ny mety hisian’ny halatra taova ao anatin’ity tranga ity”, hoy ireo mpitandro filaminana.
Drokidrokin’ireo mpiva­rotra mody ataony hoe handeha hiasa any ivelan’ny faritra ny olona kendreny. Matetika dia ireo tambanivohitra no lasi­batra noho izy ireo marefo amin’ny fahatsapana zavatra. Tambazana karama ambony ireo olona ireo dia manaiky. “Ny zava-misy anefa eto Antsirabe izay olona hanaovana fanambaràna fa tsy hita dia tena tsy hita mihitsy na maty na velona”, hoy ity lehiben’ny zandarimaria any Vakinankaratra ity.
Vao haingana, andro vitsy lasa izay, no nisy olona roa tra-tehaka nikasa hivarotra olona miisa enina. Nisy zaza amam-behivavy tamin’ireo saingy efa naverina any amin’ ny fianakaviany avokoa.
Natolotra ny Fitsarana tao Antsirabe ireo voampanga. Nahazo fahafahana vonjimaika izy ireo. “Matetika tsy ampy ny vesatra hiampangana ireo olona. Na ireo mpi­tsara aza mbola sahirana momba ity resaka varotra olona ity. Efa nanaovan’ny tonia mpampa­noa lalana fanoherana ny fanafahana ireo olona ireo ka efa naiditra am-ponja izy ireo”, hoy ny kolonely Randriana­rimasy Rado.
Tsy vao izao ity tranga fivarotana olona ao anatin’ny faritra Vakinankaratra ity. Porofon’izany ny fisian’ny korontana niteraka fandoro­ana tranon’olona tany an-toerana, taona vitsy lasa izay. Io ahiahy fisian’ny varotra olona io no anton’ireny, araka ny voalazan’ireo mpitandro filaminana.
“Manana ahiahy izahay fa mety ho misy halatra taova amin’ireny tranga fivarotana olona ireny. Alainy ny taovany rehefa avy vonoina ilay olona. Mety ho mora kokoa ny miton­dra ireo taova mankany ivelany noho ilay olona mihitsy”, hoy ny avy amin’ny zandarimaria any Antsirabe.
Efa samy nahitana ity tranga fivarotana olona ity avokoa ankoatra ny ao an-dreni­vohitra Antsirabe ny any Betafo sy Mandoto. Manoloana ity zava-doza mitranga ity, miezaka mampiasa paikady maro ny avy amin’ny zanda­ri­maria any an-toerana. “Miezaka manentana olona izahay sy manazava ny zava-misy indrin­dra ireo olona heverina ho ma­refo mety mora handairan’ ny fandrebirebena. Misy koa ny fampahafantarana ny rehetra hiantso ny laharana 119 ahazoana ny zandarimaria. Tsara ny manamarika fa maimaim-poana ny fiantsoana io laharana io amin’ny finday rehetra. Raha misy tranga mampiahiahy dia aza misalasala mampandre anay fa efa misy olona vonona handray izany ato aminay. Ankoatra izay dia misy ny fanamafisana ny fahalalan’ireo zandary manao famotorana momba ny fiva­rotana olona mba hahafeno ny famotorana momba ny fivarotana olona”, hoy ny lehiben’ny zandarimaria any Antsirabe.
Fanafihana teny an-dalana Pasitera nandeha môtô voaroban’ ny andian-jiolahy
Fahitana razana Fatin’olona efa simba teny Ambohimanambola
Antsirabe Naiditra am-ponja ilay ray voatondro ho namono ny zanany roa
Fahafatesana vahiny :: Lehilahy frantsay iray hita faty tao anatina sambo lehibe
Loza tany Antsirabe